Posted by Tranquillus | Oct 2, 2018 | Xirfadaha hadalka iyo qoraalka afka
Cordial Pro: waa maxay?
Cordial Pro waa qalab kaas oo lagu daro software qoraallada kala duwan. Waxay u ogolaataa, sida fiqiira saxi qaladaadka naxwaha, luqadeed, suugaaneed iyo iskudhaf ahaaneed si laguu ogolaado inaad ku hagaajiso tayada qoraaladaada, waxkastoo asalkoodu yahay, inaad ku horumariso xirfadahaaga qorista Faransiiska ama luqad kale iyo inaad waqti badan ku keydiso akhrintaada. iyo sixitaanka qoraalka.
Qalab sida Cordial Pro macno ahaan muhiim ayuu u yahay mihnad-xirfadeedka, si loo soo bandhigo nuxur tayo leh oo aan lahayn ama aan ku dhowaad khaladaad lahayn. Si kastaba ha noqotee, waxba ma beddeli doonaan saxeexa dhabta ah ee aadanaha, laakiin Cordial Pro wuxuu oggol yahay in la yareeyo tirada khaladaadka iyo khaladaadka farsamooyinka ah oo aad u weyn oo weli ku filan isticmaalka dhaqanka ee ganacsiga.
Yaa Cordial Pro for?
Isticmaalida barnaamijyada qaabeynta qoraalka ah ee muuqaalka ayaa laga yaabaa inay u muuqdaan kuwo aan loo baahnayn haddii aad horey uqoreysay qoraa, laakiin maahan. Runtii muuqaalada badan ee software wuxuu kuu ogolaanayaa inaad waqti badan ku kaydiso dib u akhrintaada, taas oo kuu ogolaan doonta, adoo adeegsanaya indhahaaga khaaska ah si aad u ogaato dhammaan khaladaadka daqiiqadaha halkii saacadood, taas oo kuu oggolaaneysa si loo kordhiyo faa'idada saacadlaha ah.
Dhanka kale, haddii aad ka shaqeyso qayb aan caadiyan shaqo ku lahayn qorista oo aadan ku qanacsanayn luqadda Faransiiska iyo kumanaan nooc oo kala duwan, mid kastaa wuu ka adag yahay kuwa kale, waxaa laga yaabaa inaad hore u wajahday xaaladda. Halka aad ku qanacday in aad qaban karto shaqada rajadaada, oraahdaadu waxay ahayd mid ka xiiso badan tii tartamayaashaada, laakiin nasiib daro, khaladaad badan oo xagga higaada ah ayaa ku keenay khalad, rajadaaduna ma aqbalin dalabkaaga sababtoo ah ma tixgelineynin soo jeedintaada. lagu kalsoonaan karo marka la eego tirada cilladaha.
READ Sida loo abuuro emailkaaga internetka si fudud oo bilaash ah
Xaqiiq ahaan, gaar ahaan Faransiiska, in ay xun yihiin hingaadka ama naxwaha waxaa inta badan la mid ah calaamad muujin la'aanta, xitaa tiknoolajiyada gacanta oo aan waxba ku lahayn qorista! Dareenkan, isticmaalka software sida Cordial Pro ayaa dukumiintigaaga ku dhejin doona ereyga shakiga ah ee macquul ah oo xirfad leh iyo welwelkaas, hase yeeshee si fiican, ma noqon doonto wax ka mid ah hawlahaaga!
Cordial Pro ayaa sidoo kale u adeegi doona tifaftireyaasha shabakadaha iyo bloggers, kuwaas oo si toos ah uga shaqeeya boggaga sida WordPress. Xaqiiqdii, tani waa kan ugu xoojiyaya awoodda badan marka la eego isticmaalka internetka iyada oo aan loo marin software sida Word oo aad noqon doonto caawimo weyn oo aad si toos ah ugu qori karto shabakadaada.
Waxaa intaa dheer, iyada oo aanad ka fekereynin goobta ama blogka, Cordial Pro wuxuu noqon doonaa caawimaad weyn haddii aad haysato caado u ah qoraallada maalin kasta oo aadan ubaahnayn inaad haysato waqti aad nuqul ka sameyso qoraalka jaangooyada caadiga ah ama xitaa software-ka wax lagu qoro oo leh hagaajin toos ah.
Astaamaha Cordial Pro
Sidaas daraadeed barnaamijkan ayaa faa'iido u yeelan doona dhinacyo kala duwan iyadoo ku xiran hadafkaaga iyo danahaaga. Halkan waa sharaxaad kooban oo ku saabsan sifooyinka muhiimka ah ee Cordial Pro.
Waxay ujeedadeedu tahay fududaynta dhammaanba. La-qabsiga dhammaan warbaahintaada si toos ah iyo guud ahaan maqnaanshaha baahida loo qabo in lagu tababaro isticmaalka software-ku waxay u badan tahay inay tahay hantida koowaad ee Cordial Pro ee heerka xirfadeed.
Had iyo goorba muuqaal tayo leh, Cordial Pro lagama tagin marka ay timaado bixinta isgaadhsiin cad, ergonomic iyo soo jiidasho leh, taas oo dhiirigelisa qof kasta oo isticmaala si uu u isticmaalo xad-dhaafka si looga fogaado wakhti qiimo leh iyo sidaas awgeed waxay kordhisaa waxtarka shaqadaada ee kooxahaada ama naftaada.
READ Habka asluubta leh ee loo isticmaalo borofisar ama macalin
Heerka waxtarka, halkan sidoo kale, Cordial Pro looma dhaafo maaddaama ay si sharaf leh u muujineyso heerka sixitaanka 90%, 3 jeer ka badan Ereyga! Si kale haddii loo dhigo, waad ku kalsoonaan kartaa iyadoo indhahaagu u xidhan yihiin soo bandhigid tayo leh oo ku aaddan heerka istiraatiijiga, higgaadda, naxwaha iyo qaab qoraalka!
Si aad si guul leh u hesho heerka saxo sida lagu qanci karo, Pro diiran ku salaysan yahay maktabadda qani ku ah qaamuusyo in content, oo ay ku jiraan in ka badan sharaxaadooda 190 000 iyo in ka badan 4,6 million links isku kaa caawinaya in aad loo hagaajiyo tayada qoraalada marka aad aad ku guul dareysato in la cusboonaysiiyo.
Inkasta oo sicirkeedu uu aad u sarreeyo ardayga, Cordial Pro waxay weli bixisaa qalab kala duwan oo loogu talagalay higgaadinta si loo wanaajiyo tayada qoraalkaaga waqti ka dib.
Ugu dambeyntii, Cordial Pro ayaa si isdaba-joog ah u gudubta inta badan baaritaanada ugu adag. Xaqiiqdii, imtixaannada 23 ee ay sameeyeen saxaafadda khaaska ah, Cordial Pro ayaa loo doortay 20 marxaladaha hagaajinta, diiwaanka!
Isticmaal aan fududeyn ee isticmaalka
Cordial Pro ayaa loogu talagalay isticmaalka sahlan oo loo adeegsado sida wax soo saarka Apple. Xaqiiqdii, softwareku waa mid la isticmaali karo xataa haddii aadan aqoonin kombuyuutar ama xafiis. Waxay ku xiran tahay nolol maalmeedkaaga iyo codsiyada kala duwan ee la midka ah (browser browser, Word, iwm) si toos ah ka dib markii la rakibay si loo kaydiyo waqti kasta oo lagu dhejiyo wax kasta.
Isticmaalku sidoo kale waa mid aad u macquul ah oo kuu ogolaanaya inaadan u baahnayn inaad tababarto si aad u isticmaashid sida kiiska software badan ee xirfadlayaasha guud ahaan.
READ Template warqad si ay u aqbalaan ama u diidin dheelitirka ka xisaab kasta
Barnaamijka loogu talagalay ardayda?
Haddii Cordial Pro dhab ahaantii yahay software loogu talagalay xirfadleyda, mid ayaa xaq u leh inuu la yaabo haddii ay ku haboon tahay isticmaalka waxbarashada si loo horumariyo xirfadihiisa qorista.
Isticmaalida noocaan software waa hab weyn oo lagu hagaajin karo heerka luqaddaada, laakiin Cordial Pro ayaa ka sarreeya dhammaan barnaamijyada loogu talagalay xirfadlayaasha aan ku dhibin si ay u sharaxaan khaladaadka lagu sameeyay kiisaska intooda badan iyo kuwa ka soo horjeeda si loo saxo iyaga si ay u helaan waqti iyo waxtarka, inkastoo tababarka qaarkood tababarro dheeraad ah.
Intaa waxaa dheer, qiimaha uu ka badan yahay inta badan tartamayaashiisa, tani macnaheedu maaha in ay la socoto miisaaniyadda ardayga, iyo jeegaraha jilayaasha si dhif ah ayaa loo arkaa inay si wanaagsan u arkaan waxbarashada iyo guud ahaan waxad dhiganaysaa, waxaadna heli doontaa fursad aad ku hesho qiimo dhimis ardayga ee Cordial Pro.
Sidaa darteed, haddii aadan haysan miisaaniyad wayn oo aad ku qoondayso, waxaanu doorbidi doonaa beddelaad bilaash ah oo loogu talagalay isticmaalka waxbarashada.
Ma inaad iibsato Cordial Pro iyo qiimahee?
Waxaa suura gal ah inaad hore u qancisay inaad ku amarto nuqulkaaga Cordial Pro, haddii adiga ama xubin ka mid ah kooxdaada aadna saxantahay!
La soco, si kastaba ha noqotee, waa inaad bixisaa wadarta 199 euro haddii aad xirfadle tahay, iyo 99 euro haddii aad tahay shaqsi ama arday. Isugeyn muhiim ah, laakiin taas qiil looga dhigayo marka la eego tayada barnaamijka.
Discovery of Cordial Pro Orthographic Rising Software. Nofeembar 21st, 2018Tranquillus
horeSida loo abuuro emailkaaga internetka si fudud oo bilaash ah
socdaMaxicours: tixraaca bixinta umeerinta internetka raqiis ah